ARDAA Xalqaddii 53aad: Muranka siyaasadeed ee Kenya & Soomaaliya (dhegayso) – Radio Daljir
ARDAA Xalqaddii 53aad: Muranka siyaasadeed ee Kenya & Soomaaliya (dhegayso)
Juunyo 10, 2019 8:05 g 0
Xalqadii 53aad ee ARDAA 00 Todobaadkaan ku saabsan khilaafka Soomaaliya iyo Kenya.
In muddo ah waxaa liitay xiriirka Soomaaliya iyo Kenya kaasoo xumaantiisu ay wajiyo badan leedahay, sidaad ogtihiin labada waddan waxay leeyihiin xudduud dheer oo bad iyo berriba, inkasta oo aysan ahayn mid si ikhyaari ah ku dhisan ee uu xariiqay gumaystihii Ingiriiska oo kala soodimeeyey labada dalka, taasoo la dhaxmarsiiyey waa soodimaynta ingiriiskee qayb ahaan dhul weynihii Soomaalida, raacsiisayna Kenya dad iyo deegaanno Soomaaliyeed.
Inkasta oo Soomaaaliya Kenya badanka xiiriirkoodu uu ahaa mid xasiloon, misna dhawr sano ka hor ayay soo fufay qallooc duullamaasiyadeed, mid deegaanka iyo xumaansho xiriir wadaagidda labada dhinac ah, hase ahaatee damaca Kenya ee xagga Soomaaliya waa uu quddo fogaa, mana dhawa marka ay bilawday hungurigeeda.
Arrinkaasi ayaa la tilmaamayaa in uu yahay mid wajiyo badan, waa tan koowaade midi waa tan xuduudda oo Kenya ay sheegtay qaybo ka mid ah dhul badeedka Soomaaliya, aakhirkiina gaartay in labada dal isku fahmi waayaan, taasina ay dhalisay in maxakmadda caalamiga ah ee caddaaladda ee ICJ loo yaqaanno u gudbiso Soomaaliya dacawad arrinkaasi darran, taasoo maxkamaddu ogalaatay ka dacwado qaadisteeda, doodda labada dhinacna ay dhegaystay, haddana loo madlanyahay go’aan gaarkii maxkamadda.
Iyadoo taasi ay jirto ayaa haddana dawladda Kenya bilawday cadaadisto ay saarayso Soomaalida iyo dawladdoodaba, kuna hakisay cilaawaadkii labada waddan ee xagga duullamaasiyadda, xiriirka darisno, wadaaggii wada shaqayneed iyo kii socdaalladaba.
Waxaa kale oo Kenya ay ku dhiirratay xiriir la wadaagidda siyaasiyiinta mucaaradka ku ah dawladda dhexe ee federaalka, iyo u gacan haatinta madaxda dawladaha xubnaha ka ah dawladda dhexe ee federaalka. Inahaasi iyo kuwo kale oo is biirsaday, kana soo baxay xagga Kenya waxaa loo arkay tallaabo daandaansi oo caddaan ah.
Axmed Sh Maxamuud, waa duullamaasi muddo dheer ka shaqaynayey arrimaha duullamaasiyadda, kana soo shaqeeyey waddamo dhawr ah oo ay ka mid yihiin Kenya, Maraykanka iyo Sweden. Waxaa sidoo kale wakhti badan uu ka shaqaynayey wasaaradihii arrimaha dibedda iyo tacliinta ee Soomaaliya.
Axmed, oo aan ku marti-qaadnay Barnaamijka ARDAA ee todobaadkaan, wuxuu sharraxayaa tallaabooyinkii is xig-xigay ee dhaawicidda duullamaasiyadeed ahaa ee ay ku dhaqaaqday dawladda Kenya sannadihii ugu dambeeyey sababaha gun-dhigga u ah.
ARDAA 112 Wararka 23007